Canine Conjunctivitis: Antony sy soritr'aretina | Tontolo alika
La conjunctivitis Izy io dia toe-javatra iray izay miteraka fivontosana ny membrane conjunctival ao amin'ny maso, izay mitanjozotra amin'ny atin'ny hodi-maso. Toy ny olona, ​​dia mahazatra amin'ny alika izany, ary mety hiteraka areti-mifindra. Noho izany, zava-dehibe ny fahafantarantsika ny fomba hisorohana sy hamantarana azy.
Izy io dia afaka mamokatra amin'ny antony samihafa. Indraindray io dia olana iray ateraky ny antony manokana, toy ny fampidirana vatana vahiny eo amin'ny maso. Izy io koa dia mety ho mariky ny allergy na aretina sasany, toy ny distemper na keratoconjunctivitis sicca. Indraindray koa dia mitranga izy io vokatry ny fivontosan'ny valanaretina kornea.
Misy ny sasany ny ankamaroan'ny karazana mirona noho ny hafa mijaly amin'ity olana ity, toy ny pug sy ny Pekingese, satria ny masony dia miharihary kokoa amin'ny ivelany. Ny poodle sy ny spaniel akoho koa dia ao anatin'ity lisitra ity, noho ny antony mandova. Noho io antony io dia mitaky fikarakarana bebe kokoa ireo faritra ireo.
La conjunctivitis dia miavaka amin'ny andiana soritr'aretina tena manokana. Ny iray amin'ireo fisehoana voalohany dia ny triatravatra be loatra, matetika miaraka amin'ny famoahana ranoka fotsy na mavo (maitso amin'ny tranga faran'izay mafy). Io kosa dia mety hiteraka fahasahiranana mafy manokatra ny maso voany, ary koa ny mangidihidy.
Ny alika mety handratra tena ianao amin'ny fikororohana, noho izany dia tsy maintsy entintsika eo noho eo izy amin'ny mpitsabo biby alohan'ny famantarana ny tsy fahazoana aina. Azo inoana koa fa holavin'ilay biby ny tara-masoandro na hazavana artifisialy, satria tsy hahazo aina izy io. Ary koa, ny mena sy ny fivontosana dia mipoitra matetika ao amin'ilay faritra.
Alohan'ny iray amin'ireo famantarana ireo dia tsy maintsy ataontsika mandehana haingana any amin'ny toeram-pitsaboana biby. Miankina amin'ny antony nahatonga ny conjunctivitis, ny manam-pahaizana manokana dia hitantana fanafody iray na iray hafa; ny mahazatra indrindra dia antibiotika lohahevitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Conjunctivitis Canine: antony sy soritr'aretina